आजको राशिफल - भदौ १२ गते मङ्गलबार (भिडियो सहित) - Pokhara News
आजको राशिफल – भदौ १२ गते मङ्गलबार (भिडियो सहित)
पोखरा न्यूज – १२, भदौ ।
आज वि.सं. २०७५ भाद्र १२ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अगस्ट २८ तारिख, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, पूर्वाभाद्रा नक्षत्र, कुम्भ राशिको चन्द्रमा, धृति योग, तैतिल र गर करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : रोपाइँ जात्रा, दथुसाया यलमतया, त्रिपुष्कर योग दिउँसो ०४ बजेर ४७ मिनेटसम्म
भोलिको मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), अग्निवास(होमादि), शिलान्यास (सामान्य), डेरा सर्ने, दैलो राख्ने,
राहु काल : दिउँसो ०३:१६ देखि ०४:५२ सम्म
यमघण्ट : बिहान ०८:५२ देखि १०:२८ सम्म
गुलिक काल : दिउँसो १२:०४ देखि ०१:४० सम्म
काल वारवेला : दिउँसो ०१:४० देखि ०३:१६ सम्म
रोग वारवेला : बिहान ०५:४० देखि ०७:१६ सम्म र साँझ ०४:५२ देखि ०७:५२ सम्म
लाभ वारवेला : बिहान १०:२८ देखि १२:०४ सम्म
भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने मिठाइ वा तिल खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
व्यवसायमा अप्ठ्यारा र असजिला पक्षको चिन्तनमा एकाबिहानै मन घोत्लिने सम्भावना पनि छ । के गरौं र के गरौं भइरहनाले निर्णय क्षमतामा कमी आउन पनि सक्छ, तर आजबाट मन रमणीयतातर्फ आकर्षित बन्नेछ । भावुकता र काल्पनिकतामा अल्मलिएर गर्नैपर्ने काममा विलम्ब हुनसक्छ । कामकाजमा जाँगर चल्दैन, मन भावुक र रोमान्टिक बन्न सक्छ । जीवनसाथी वा प्रेमी/प्रेमिकालाई समय दिनु राम्रो हुन्छ, नत्र दाम्पत्य सम्बन्ध वा प्रेमी/प्रेमिकाका बीचमा चिसोपन बढ्ने सङ्केत छ । बन्दव्यापार सामान्य नै रहने देखिन्छ । अरुले साथ देलान् भन्ने आशा त्यागी कर्मशील हुनु राम्रो हो ।
सुरुमा तेस्रो भावमा चन्द्रमा रहेकाले सामाजिक र परोपकारका क्षेत्र केही समय व्यतीत हुनसक्छ । तर दिउँसोबाट चौथो घरमा पुग्ने चन्द्रमाको प्रभावले असहज परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । बन्दव्यापारमा भनेजस्तो सफलता प्राप्त हुँदैन । प्रेम र प्रणयसम्बन्धमा तिक्तता आउनसक्छ । मातापिता वा घरका ज्येष्ठसदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्न सक्छ । घरपरिवारसँगै बस्नेहरूका लागि आजको दिन गतिलो छैन, अनावश्यक दौडधुप गर्नु पर्नेछ, काममा किसिमकिसिमका चुनौती देखा पर्नेछन्, नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । तर देशपरदेशमा रहनेहरूले केही हदमा सकारात्मक फल प्राप्त गर्नेछन् ।
दिनको सुरुवातमा धनागमका नयाँ नौला मार्गको चिन्तन गरिने छ । तर दिनभरि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने समय छ । मनमा उत्साह र उमङ्गमा कमी हुने छैन । घरायसी र पारिवारिक झैझमेलामा पनि केही समय प्रदान गर्नु पर्नेछ । मातापिता वा अभिभावकवर्गका चाहनालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । तपाईंको चियोचर्चो गर्ने र कुरा काट्नेको सङ्ख्या बढेको अनुभूति हुनेछ । नजिकैका साथीभाइ र आत्मीयजनले सकेको मदद गर्नेछन्, तर चाहनाबमोजिम छिटो कार्य सम्पन्न हुन कठिन छ । मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । छोटो यात्रा सफल नै हुन्छ, तर लामो यात्राबाट हानि हुनसक्छ ।
घान्द्रुकको विकासका लागि पोखरामा भलिवल प्रतियोगिता हुने